Home Wararka Dowladda NN ee Fahad, Farmajo iyo (RW Rooble?) oo Go’aansatay inay Khaarijiyaan...
Dowladda NN ee Fahad, Farmajo iyo (RW Rooble?) oo Go’aansatay inay Khaarijiyaan HSM.
Xog dheeraad ah oo laga helay Weerarkii 2/6/2021 lagu qaaday MW hore Xasan sheekh Maxamud ayaa muujineysa in ujeedku ahaa si noloshiisa lagu soo gaabiyo oo uusan u gaarin doorashada dalka ka dhaceysa 2021 , taas oo uu yahay qofka kaliya ee so celin kara rajada ummadda dalkana ka badbaadin kara xaaladda khatarta ah ee uu ku sugan yahay.
Hore waxay Farmajo iyo Fahad isku dayeen dhow jeer inay kharijyaan MW hore Xasan Sheekh Maxamuud laakiin ayaa weli wax ka dhiman yihiin:
Inay MW hore Xasan sheekh Maxamuud dayuurad kula qarxiyaan hawada sare isagoo u sida Samafal shacabka gobolka Hiiraan, gaar ahaan Baletweyne oo ay dadkeedu gaajo, dhaxan, qabow iyo rafaad u dhimanayeen, kadib markii uu wabiga ku soo fatahay. Waxaana la xusuustaa in lacagihii gargaarka ee ay dadka Somaliyeed iska soo ururiyeen iyo kaalmadii dunida ka timid ee soo martay dowladda FS aan la ogeyn meel ay martay, maantana Waare iyo Xasan kheyre ay isku eedeynyaan ciddii la cuntay Fahad iyo Farmajo.
Waxaa kaloo MW HSM la isku dayey in lagu dilo weerar toos ah oo lagu qaaday 19 Febraayo 2021, isaga iyo MW hore Sharif Sh Axmed iyo Gudoomihii Barlamanka Federalka Shariif Xasan Sh Aden. Arrinkaas waxaa uu ahaa qorshe aad looga soo shaqeeyey oo ay fulinayeen saraakiil sare oo ka tirsan Madaxtooyada Somaliya iyadoo ilaa iyo hadda aan cidna loo qaban, kadib markii laga beensheegay in guddi loo saarayo.
Waxaa weerar toos ah lagu qaaday guriga uu ka deggan yahay Xamar 25kii April 2012, iyadoo qorshaha uu ahaa in la dilo kadibna la iska warsado oo uu Fahad ooyo, Farmajo iyo Rooblana ka tacsiyadeeyaan balse laba ilaa seddex maalmood ay hawluhu caadi ku soo noqdaan. Ujeeadana waxay ahayd iyo ilaa haddana uu yahay in saaxadda siyaasadda laga saaro maadaama uu yahay hogaamiye ay shacabku jecel yihiin, been iyo dayaacad kastaa oo laga fidiyaana ay suuragli weysay in sumcadiisa hoos loogu dhigo, waayo dadka Somaliyeed waa xisaabtamayaan oo waxaa ku filan meeshii la joogay 2015/16 iyo maanta 2021 meesha uu dalku joogo.
Maanta oo ay taariikhdu tahay 2dii Juun 2021 ayaa markii afraad la isku dayey in la khaarijiyo MW hore Xasan sheekh iyadoo barta lagu khaarijin rabay ay ahayd bartii hadda ka hor lagu khaarijin rabay dhammaan duubabka mudulood Imaamka iyo Ugaaska oo ka yimid tacsi nin weyn oo ehel ahaa balse ahaa shakhsi qarameed oo dalka ka baxay.
Haddaba arrimahaan waxay muujinayaa in Fahad iyo Farmajo oo ku gabbanaya dowlad dhacday oo aan la iska dulqaadin lana sugayo in la xalaaleeyo inay dalkaan, dadka Xamar deggan iyo madaxdii hore weerar ku yihiin. Waxaana laga yaabaa in marka shanaad ay gaaraan ujeedadooda ah in la khaarijiyo madaxda Muddoolood gaar ahaan kuwooda wax galka ah oo uu ugu horreeyo MW Xasan sheekh Maxamud.
Ogaada caawa waxay arrinta dul taallaa RW Rooble inuu wa ka qabto iyo inuu u daayo ciidanka Badbaado qaran inay la wareegaa gebi ahaanba amaanka muqdisho iyo xataa kan doorashada maadaama aysan madaxdii hore Xamar si xor ah u mari Karin oo murashaxiinta ay dareemayaan inay dowladdii waqtigeedu dhammaaday ay xaaladda kharibeyso.
Waxaa jirta xikmda oraneysa dowlad waa seddex midood:
Dowalad laguu dilayo oo ay Khasab tahay inaad iska dulqaaddo, una martid waddo kastaa iska dulqaadkeeda waana halka ay ku dambeysay dowladdii Maxamed Siyaad, iyadoo tanna ay hadda jidkaas ku socoto oo haddaan la iska dulqaadin 30 sano oo kale loo dhibaatoon doono waxa saacado lagu xallin karay balse la fududeystay. Dowladdii ay naftaada, maalkaadga iyo sharaftaada u timaado waa inaad iska qabataa waana waxa hadda dadka Xamar deggan lagu sameeyo, iyadoo aan degmo kale iyo beelo kale lagu sameyn Karin.
Dowalad aan waxba kuu dhimeyn oo aad noloshaada qabsan karto taaso oo ugu yaraan ku nabadgelineysa oo maalkaaga, sharafkaa iyo naftaada kuu nabagelineysa.
Dowlad aad adiga gacantaada ku haysatid oo aad wanaag badan bulshadaada ugu qaban kartid, taas oo ah dowladda saxda ee loo baahana yahay oo ay tahay inau mar waliba jirto. Dowlad sidaas ayey dadka Somaliyeed ku haysteen Xasan Sheekh Maxamud, hasa yeeshee iyadoo la xiaabtamin ayaa waxaa lagu badashay dowlad qori amaankiisu furan yahay dadka kula dhex ordeysaa taas oo ay hogaaminayaa dhagarqabayaal xukunka u adeegsanaya inay wax ku dhibaateeyaan.
Sidaas darted dowladnimad ma gasho ku day iyo hebel waa ila fiican yahay, mar waliba waxay u baahan tahay in la hubo qofka loo dhiibayo in la yaqaanno oo uu leeyahay taariikh la akhrin karo oo waxqabad leh. Waana inaan la isku khaldin shaqaale fiican oo shaqadiisa ka soo bixi jiray iyo hogaamiye wax soo dhisay, waxna so abuuray oo ah laba aad u kala fog. Ma jiro ruux dhameystiran oo ilahay oo kaliya ayaa dhameystiran laakiin qofka wax loo dhiibanayo waa in hadda kadib la iska hubiyaa dibna loo eegaa wax qabadkiisa waana hadalkii qiimaha badnaa ee uu yiri Madaxweyne Aden Cabdulle Cisman ahn “ Somalida raggeeda ha kala barato”. Waxayna ku tuseysaa inaan weli kala baran oo ahayd gef weyn inaan Xasan Sheekh ku badalannay Farmajo, waana aqoonxumada taariikhdooda nagu dhaaftay iyo odoroska mustaqbalka oo naga yaraaday.
Gabagabadii Somalida Raggeeda ha kala barato oo badbaadiye yeysan burburiye ku badalan berrina yeysan ka shalleyn.